I-Classic Classic Golf Tournament kwi-PGA Tour
I-Classic Classic iye yayeka rhoqo kwi-PGA Tour ukususela ekuqaleni kwee-1970, ihlala ihlala eFlorida. Umqhudelwano udlala umdlalo ngaphezu kweemigodi ezingama-72, emva kweemeko ezingama-36.
I-Honda Motors ibe ngumxhaswa wesihloko ukususela ngo-1984, ixesha elide eliqhubekayo lokuxhaswa kwetayitile ekutyeleleni. Kodwa ngamanye amaxesha uqhubeka uvala igalofu elidala-lixesha libhekisela kule "njengaye" uJackie Gleason "- malunga neshumi leminyaka yokuqala yobukho beentlalontle yayingenwe ngumculi omkhulu kunye nomdlali.
U-Justin Thomas wadubula u-65-68 ngeveki, wabuyisa umqhudelwano kwi-hole yokuqala yokufa ngokukhawuleza. UTomas noLuka Uluhlu luboshwe emva kweembobo ezingama-72 kwi-8-ngaphantsi kwe-272. Kodwa uTomas wawunqoba kunye ne-birdie kwi-List kwi-hole yokuqala. Kwakuyi-PGA ye-Tour win no-8 kaTomas.
URickie Fowler wakhupha umgodi wokugqibela webhola, kodwa ekubeni wayekhokelwa ngamashumi amahlanu ekuqaleni komngxuma awunandaba. I-Fowler iphelile ngo-12-phantsi kwe-268, imivimbo emine engcono kuneemgijimi zikaMorgan Hoffman noGary Woodland. Kwakuyi-Fowler yesine yokuphumelela komsebenzi kwi-PGA Tour.
UAdam Scott kwafuneka akhiphe isithintelo sakhe sokumisa ngenxa yokuvalwa kwesithintelo esitsha, kodwa oko akuzange kumvimbele ekuphumeleleni okokuqala ngqa ngo-2014. UScott wadubula u-70 - ukuvala ngokugqibela emva kwe-16 umgodi - ukuphumelela ngesifo esisodwa kumgijimi uSergio Garcia.
UScott wagqiba ngo-9-ngaphantsi kwe-271. NguScott wokuphumelela kwe-12 kwiPGA Tour.
I-PGA Tour Honda Classic Scoring Records
Ingxelo epheleleyo: 264 - UJustin Leonard, 2003 (63-70-64-67)
I-Tournament irekhodi engama-18: 60 - UBrian Harman, ngo-2012
Iiklasi zeGlasi Classic zeGrafu
Ngo-2007 i-Honda Classic idlulele kwi-PGA National (i-Champions Course) kwi-Palm Beach Gardens, i-Fla., Kwaye ilapha i-tournament ihlala.
Kwiintsuku zokuqala zalo mqhudelwano, ikhosi yokumema yayiyiNgqungquthela yeGrafu ne-Country Club (i-East Course) e-Lauderhill, i-Fla., Kunye ne "Ukungafani" yayiyinxalenye yegama lomqhubi ukususela ngo-1972 ukuya ku-1983.
Ezinye iikhosi zemicimbi kule mbali:
I-TPC i-Aagle Trace, i-Coral Springs, i-Fla.
I-Weston Hills Golf kunye neKlabathi yeSizwe, i-Fort Lauderdale, i-Fla.
Iqela leLizwe e Mirasol, ePalas Beach Gardens, Fla.
Amaqiniso kunye neTrivia malunga ne-Honda Classic
I-Honda Classic yaqala kwi-PGA Tour ngowe-1972 njengoJackie Gleason's Inverrary Classic (ngokungafaniyo kuba negama lekhosi). Igama likaGleason lalinesihloko kuze kube ngo-1980, kwaye "Ukungafani" ukuya ngowe-1983.
UJack Nicklaus wayinqoba iClub Classic kabini, ngowe-1977 no-1978, kwaye yiyona yedwa iqela lokubuyela emva. Zomibini iintlawulo zakhe zaziwa, nazo. Ngomnyaka we-1977, wabetha uGary Player ngemivalo emihlanu, isona sisona sikhulu sokunqoba kulo mcimbi. Kwaye ngo-1978, waphumelela ngokugqiba ama-birdies amahlanu alandelayo. Ingxelo yePGA Tour yezona zihlandlo ezilandelelanayo zokugqiba umdlalo kwaye uthathe ukunqoba.
Ngaphambi kokuba i-Championship Championship ihlale kwikhaya layo elisigxina kwi-TPC Sawgrass, lijikeleze phakathi kwezifundo. Ngowe-1976, i-Players Championship yenzeke ngokungafaniyo. UJack Nicklaus wayinqobile i-TPC ngaloo nyaka, kwaye kwi-Web Classic esemthethweni yeWebhusayithi uNicklaus ngoko ke unikwe iinqanaba ezintathu kulo mqhudelwano. Nangona kunjalo, ukunqoba kuka-1976 kwakukho kwi-Players Championship, kungekho kwi-Inverrary Classic, kwaye iirekhodi ze-PGA Tour irekodi zibeka uluhlu lwe-Inverrary Classic njengoko "aludlalwa" ngowe-1976.
U-Tom Weiskopf wancinci lo mdlalo wokuqala ngo-1972, ebhala uNicklaus ngengozi, omnye wabagijimi abathathu ugqiba i-Golden Bear. U-Payne Stewart wagqiba okwesibini kwiClass Classic, ngaphandle kokuwina.
Ngaphandle kweNicklaus, abanye abaphumelele kwixesha eli-2 lalo mqhudelwano nguJohn Miller (1980, 1983) noMark Calcavecchia (1987, 1998).
Ngomncintiswano wakhe we-2005, uPadraig Harrington wavula nge-73 waza wavalwa nge-63, ngaloo ndlela wabeka iirekodi ezimbini zethenkethi: amanqaku aphezulu aphezulu ngokuphumeleleyo, kunye nomgca wokugqibela wokugqibela.
Abaphumeleleyo be-PGA Tour Honda Classic Tournament
(i-p - playoff; w-sezulu ifutshane)
2018 - UJustin Thomas-p, 272
2017 - uRickie Fowler, 268
2016 - uAdam Scott, 271
2014 - URussell Henley-p, 272
2013 - uMichael Thompson, 271
2012 - uRory McIlroy, 268
2011 - uRory Sabbatini, 271
2006 - uLuka Donald, 276
2005 - UPadraig Harrington-p, 274
2003 - UJustin Leonard, 264
2001 - uJesper Parnevik, 270
2000 - uDudley Hart, 269
Ngo-1999 - u-Vijay Singh, 277
1998 - uMark Calcavecchia, 270
1997 - iStuart Appleby, 274
1996 - iTim Herron, 271
Ngo-1995 - uMark O'Meara, 275
1994 - iNick Price, 276
Ngo-1993 - UFred Couples-wp, 207
1992 - uCorey Pavin-p, 273
Ngo-1991 - uSteve Pate, 279
Ngo-1990 - uJohn Huston, 282
1989 - UBlaine McCallister, 266
Ngo-1988 - uJoey Sindelar, 276
Ngo-1986 - uKenny Knox, 287
Ngo-1985 - uChartis Strange-p, 275
1984 - UBruce Lietzke-p, 280
Ngo-1983 - uJohnny Miller, 278
1982 - UHale Irwin, 269
Ngo-1981 - uTom Kite, 274
1980 - uJohnny Miller, 274
Ngo-1979 - uLarry Nelson, 274
Ngo-1978 - uJack Nicklaus, 276
Ngowe-1977 - uJack Nicklaus, 275
1976 - Ayidlala
Ngo-1975 - uBob Murphy, 273
1974 - uLeonard Thompson, 278
Ngo-1973-Lee Trevino, 279
Ngowe-1972 - uTom Weiskopf, 278
Ionic Equation Inkcazo
Funda Ukudlala iTennis yeTable
Ukuqulunqwa kwexabiso leMarike yeColor Car